#Maxaa ka jira In Hogaamiyaha Dalka Jabuuti Geelle uu kusoo wajahan Yahay Xamar - Get Latest News From Horn of Africa
#Maxaa ka jira In Hogaamiyaha Dalka Jabuuti Geelle uu kusoo wajahan Yahay Xamar
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in todobaadkaan ay soo gaaraan magaalada Muqdisho sida ay Caasimada Online u xaqiijiyay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xog aynu helayno ayaa tibaaxeyso in Sabtida la filayo in Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu soo gaaro magaalada Muqdisho laba sano kadib.
Madaxweynaha Jabtuuti ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato Madaxda dowladda Soomaaliya waxa uuna kala hadli doonaa xaaladda Soomaaliya, howlgalka AMISOM iyo isbadalada ka socda geeska Africa, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegayaan.
Madaxweyne Geelle, Soomaaliya waxaa ugu dambeysay bishii February sanadkii 2017, markaas uu ka qayb galay Caleema saarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo. Socdaalkaan ayaa noqonaya 2 sano kadib safarkiisii ugu horreeyey ee Soomaaliya.